हिन्दूत्वका नाममा फेरि राजतन्त्र फर्काउने कोसिस : भट्टराई
प्रकाशित मिति : 9:20 pm, August 13, 2015
हामी १३ बाट १० मा ओर्लियौं र ८ सम्मको प्रदेश भए पनि बनाउँ भन्ने प्रयत्न ग¥यौं । तर, अहिले हाम्रो तागत नपुगेपछि ६ मा ओर्लिनुप¥यो ।
यसलाई दुई ढङ्गबाट हेर्नु पर्दछस एउटा त उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्गको हक अधिकारका निम्ति इमान्दारितापूर्वक आवाज उठाउने पक्ष छ– त्यसमा म पनि शतप्रतिशत सहमत छु । खासगरी उत्पीडित जाति, मधेसी र जनजातिहरुले आफ्नो पहिचान र अधिकारसहितको संविधान पाउनुपर्दछ भनेर अग्रपंक्तिमा लड्नेमध्ये म आफैं पनि हुँ । त्यसैले पहिचान र अधिकारसहितको संविधान बनोस् भन्ने मेरो पनि चाहना हो । त्यस्तै, महिला र दलितलगायतका अन्य उत्पीडित वर्गको अधिकार पनि अधिकतम समेटिऊन् भनेर बढी संघर्ष गर्नेमा पनि म अग्रपंक्तिमा उभिँदै आएकै हो । त्यो कोणबाट जुन आवाज उठेको छ, त्यसमा मेरो पूर्ण ऐक्यबद्धता छ । खासगरी अहिले हामीले जातीय र भाषिक पहिचानसहितको राज्य बनाउँदा करिव १३ वटा प्रदेशमा जानुपर्ने हुन्छ, जो माओवादी पार्टीले म संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्को अध्यक्ष हुँदादेखि नै उठाउँदै आएको थियो । त्यो नै सबैभन्दा वैज्ञानिक आधार हो । तर, त्यसलाई त हामीले कायम गर्न सकेनौं, पछि हामी १३ बाट १० मा ओर्लियौं र ८ सम्मको प्रदेश भए पनि बनाउँ भन्ने प्रयत्न ग¥यौं । तर, अहिले हाम्रो तागत नपुगेपछि ६ मा ओर्लिनुप¥यो । छ प्रदेशमा जाँदा त तिनै १३ प्रदेशका क्लस्टरहरुलाई सकेसम्म नटुक्रनेगरी २÷३ वटा क्लस्टर मिलाएर एउटा प्रदेश बनाउनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैले अहिले ६ प्रदेश बनाउँदा तिनै १३ प्रदेसका क्लस्टर नबिग्रनेगरी एक–अर्कोमा मिलाएर जाने प्रयत्न गरेका छौं । त्यसैले सैद्धान्तिक रुपमा हामीले हाम्रा मान्यता छाडेका छैनौं । त्यो कुरा नबुझ्दा कतिपय साथीहरुमा भ्रम पनि परेको छ । तर, अर्को एउटा प्रवृत्ति त विभिन्नखाले चर्का कुराहरु उठाइदिएर संविधानसभाबाट संविधान नै बन्न नदिने र देशलाई प्रतिगमनतर्फ लिएर जाने गम्भीर षडयन्त्र रच्दैै छ । हिन्दूत्वका चर्को कुराहरु उठाएर जनताको धार्मिक भावना भड्काउने र संविधानसभाबाट संविधान नै बन्न नदिने अनि प्रकारान्तरले धर्म र गाईका नाममा राजतन्त्र फर्काउने गम्भीर दुष्प्रयत्न भइरहेको छ । अहिलेको नेपालको विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्थामा विभिन्न शक्तिहरुले पनि त्यसलाई गिजोलेर आफ्नो निजी स्वार्थपूर्ति गर्ने षड्यन्त्र पनि एकापट्टि छ । एकापट्टि इमानदारितापूर्वक आफ्नो अधिकारका निम्ति लड्ने पक्ष र अर्कोपट्टि जनताका जायज मागलाई भड्काएर कुत्सित प्रतिगामी उद्देश्य पूरा गर्ने प्रवृत्ति छ । यी दुईवटालाई अलग गरेर हेर्नु पर्दछ । त्यस हिसाबले अहिले जुन सहमतिको संविधान बन्नेगरी पछिल्लो सहमति भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जानुको विकल्प हामीसँग छैन ।
जनताको जनजीविकालाई सहज बनाउनेभन्दा आफ्नो जिल्ला, आफ्नो चुनाव क्षेत्र, आफ्नो अञ्चललाई केन्द्रमा राखेर अखण्ड भन्ने जुन खालको नारा उचालिँदै छ, त्यो अत्यन्तै घातक र गलत छ ।
अहिले जुन ६ प्रदेशको सीमाङ्कनमा सहमति बनेको छ, हामीले त्यसलाई १० प्रदेशसम्म गरौं भनेर अन्त्यसम्म अडान लिएका थियौं । त्यो सम्भव नभएपछि ६ प्रदेश स्वीकार्न हामी बाध्य भयौं । ती ६ प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दाखेरी पनि हामीले के ध्यान दिएका छौं भने अरुले पुरानै पञ्चायतकालीन जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रलाई अखण्ड कायम राख्ने प्रयत्न जारी राखेका छन् । जनताको जनजीविकालाई सहज बनाउनेभन्दा आफ्नो जिल्ला, आफ्नो चुनाव क्षेत्र, आफ्नो अञ्चललाई केन्द्रमा राखेर अखण्ड भन्ने जुन खालको नारा उचालिँदै छ, त्यो अत्यन्तै घातक र गलत छ । त्यसैले हामीले ६ प्रदेश बनाउँदा के प्रयत्न ग¥यौं भने जातीय र भाषिक पहिचान तथा उनीहरुको बसोबासको जुन निरन्तरता छ, त्यसलाई छुट्न नदिईकन त्यस्ता समुदायलाई एक ठाउँमा मिलाएर मिश्रित खालको प्रदेश बनाउने प्रयत्न हामीले गरेका छौं । प्रदेश नं. १ मा हिजो माओवादीले भन्दै आएको लिम्बूवान, किरात र कोचिला गरी ३ वटा प्रदेश छन् । २ नं। प्रदेशमा भोजपुरा र मिथिला राखिएको छ । त्यस्तै ३ नं प्रदेशमा ताम्सालिङ र नेवाः राखिएको छ । ४ नं. प्रदेशमा मुख्य रुपमा तमुवान र मगरातपट्टिको केही भूभाग पर्न गएको छ, त्यो अलिकति मिलेको छैन । ५ नं। प्रदेश अलि फरकजस्तो देखिए पनि त्यो अवध, थारुवान र मगरात तीनवटा मिलेर बनेको छ । ६ नं प्रदेश चाहिँ भेरी–कर्णाली र सेती–महाकाली मिलाएर बनेको छ । ६ प्रदेशको मूल आधार यही हो, यसमा केही नमिलेका ठाँउ छन् । जस्तै– ५ नं। प्रदेशमा पूरै थारुवान प्रदेश (दाङदेखि कञ्चनपुरसम्म) हुनुपर्दथ्यो, त्यसमा चाहिँ सुदूरपश्चिमका केही नेताहरुको स्वार्थका कारण उनीहरुले कैलाली र कञ्चनपुरलाई त्यसमा मिलाउन दिएका छैनन् । त्यसबाहेक मगरातको अर्को पाटो पूर्वी मगरातको बाग्लुङ र म्याग्दी त्यसमा राखिनुपर्नेमा उल्टो बाग्लुङ र म्याग्दी अखण्ड हुनुपर्दछ भनेर उल्टो नारा त्यहाँ चलेको छ । सल्यान र रुकुमको हकमा भौगोलिक रुपले मगरात भए पनि जातीय हिसाबले आर्य–खस बाहुल्य क्षेत्र हो । त्यसैले त्यसलाई सम्बन्धित जनताको चाहनाअनुसार ५ नं। या ६ नं। जता पनि राख्न सकिन्छ । मुख्यतः थारु बाहुल्य क्षेत्र खण्डित हुन पुगेको छ, अहिले नमिलेको पनि त्यहाँनेर नै हो । अन्तिमसम्म पनि त्यसलाई मिलाउने प्रयत्न गरिनु पर्दछ । अन्यथा, मोटामोटी रुपमा त्यो क्लस्टर मिलाएर नै यो प्रदेश मिलाउने प्रयत्न गरिएको छ ।
संयुक्त प्रदेश हुँदा त त्यही नै हुन्छ । सम्बन्धित जाति र भाषी समुदायको नै एकल पहिचानयुक्त प्रदेश हुँदा मात्र उनीहरुको अधिकार पूर्णरुपले स्थापित हुन्छ । जब अहिलेको शक्तिसन्तुलनको सापेक्षतामा हामी सहमति गर्न बाध्य भयौं भने अहिले हामीले जोड गर्ने भनेको राजनीतिक क्लस्टरहरु नटुक्रिऊन् भनेर प्रयत्न गर्ने हो । सँगसँगै, अहिलेको प्रदेशमा विशेष संरचनाको प्रावधान राखिएको छ । स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको पनि त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण संयुक्त प्रदेशमा प्रदेश नं। ६ को कर्णाली अत्यन्तै पिछडिएको छ । त्यसकारण कर्णालीलाई अलग्गै राखेर ६ नं। प्रदेशभित्र एउटा स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिने प्रावधान पनि छ । त्यसैगरी अन्य फरक पहिचानवाला क्लस्टरहरु छन्, तिनलाई एउटा विशेष क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा आन्तरिक रुपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । कुनै एउटा बिन्दुमा पुगेपछि उनीहरुको क्षमताको विकास भयो भने त्यसको आधारमा भोलि गएर छुट्टै प्रदेश पनि बन्न सक्दछन्, त्यो सम्भावना पनि बन्द गरिएको छैन ।
साउनभित्रै त व्यवहारमा सम्भव हुँदैन । तर, भदौको दोस्रो हप्तासम्म ९मोटामोटी भदौको १० गतेसम्म० हामी संविधान जारी गर्न सक्छौं भन्ने लागेको छ ।
दलहरुबीच संविधान जारी भइसकेपछिको शक्तिसन्तुलनबारे समेत मोटामोटी सहमति भएको हो ?
सरकार हाम्रो चासोको विषय होइन तथापि संविधानको व्यवस्थाअनुसार संविधान जारी भएपछि सम्पूर्ण प्रमुख पदाधिकारीहरु परिवर्तन हुने कुरा सुनिश्चित छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनलगायतबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने र त्यसैमा टेकेर जनताका थप अधिकार सुनिश्चित गर्न अगाडि बढ्ने अनि समृद्ध नयाँ नेपाल बनाउने नै हाम्रो चाहना हो । जनादेश साप्ताहिकबाट